I-China I-Slim fit design ikhaki ijonge ifashoni yoshicilelo lwesikhumba+i-polyester yepensile esikhwameni sepeni evaliweyo eneziphu evaliweyo umthamo wengxowa yokuthambisa umququzeleli isipho esikhulu samadoda abhinqileyo kwi-ofisi yeshishini lezinto zokubhala zesikolo Abavelisi kunye naBaboneleli | Camei Ele&Stationery
Uyilo oluncinci olulungeleyo olukhaki olujonge ifashoni yoshicilelo lwesikhumba+i-polyester yepensile yengxowa yepeni evaliweyo eneziphu ezivaliweyo ezinamagumbi okuhombisa umququzeleli webhegi yokuthambisa isipho esikhulu samadoda abhinqileyo kwiofisi yeshishini lezinto zokubhala zesikolo
Umba NO. : 3234 Isingxobo sePencil
Ubungakanani: 200 * 50 * 70MM
Esi singxobo sepensile seCa-Mei senzelwe ukugcina nokulungelelanisa iipeni, iipensile, iipeni zejeli, iziphawuli, iirabha, izikere, iiprotractor kunye nezinye izinto zokubhala. I-zipper ihamba kakuhle, kwaye i-polyester & yesikhumba intle kodwa ayinkulu. Uyilo lwe-Slim fit kunyekhakiumbala, iipogi ezincinci ezilungele abantu bayo yonke iminyaka. Iguquguqukayo kwaye inemisebenzi emininzi, nayo inokubonelelwa njengeepowutshi zokuzenzela, iikesi zeglasi kunye neebhegi zoncedo, ezihlangabezana neemfuno zakho ngowona mgangatho uphezulu.
Ixabiso elikhulu- Imilinganiselo: 200 * 50 * 70 MM, imilo yoxande. Icwecwe xa izip, ingena lula kwibhegi yakho yesikolo, ubhaka kunye nebhegi emfutshane. Ngexabiso elikhulu, iza neepokotho ezi-1 ezinkulu zeziphu kwaye unokubona ngokulula kwizinto zakho zokubhala kunye nezixhobo.
Uyilo olunesitayile-Umsebenzi ogqwesileyo kunye noyilo olusebenzayo, olubambekayo, oluphathekayo, ubunzima obulula kodwa bomelele.
Ngaphambili: Imilo ye-square cube ikhaki ijonge ifashoni yoshicilelo lwesikhumba+i-polyester yepensile yengxowa yepeni yokuvala ngokuvalwa kweziphu enkulu umthamo omkhulu wengxowa yokuthambisa isipho esikhulu samadoda abhinqileyo sokuthenga izinto zokubhala ze-ofisi zesikolo
Okulandelayo: Uyilo olubanzi lokuvala uziphu olubanzi olubanzi lwekhaki olujonge ngesikhumba soshicilelo lwefashoni+ipolyester yepensile yengxowa yepeni evaliweyo enepokotho yegridi yomnatha ongaphakathi kunye nesibambi sosiba esikhulu esinomthamo omkhulu webhegi yokuthambisa isipho esikhulu sabafazi ababhinqileyo bezinto zokubhala zeofisi yeshishini.
ukulungiselela iofisi ishishini izinto zokubhala esikolweni
uyilo lokufaneleka olubhityileyo
Isingxobo sepensile esinomzobo onothando esipetshisiweyo esine...
Iipolies zebheji ezinemibala eqaqambileyo yekhathuni...
Imibalabala i-twill iridescent glitter+PU yesikhumba co...
Isingxobo sepensile sepolyester esinemibala emininzi okanye...
Imilo yetyhubhu engunxantathu umbala oqinileyo wePU yesikhumba pe...
IKhaki ijonge ifashoni yoshicilelo lwesikhumba+polyeste...